राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा २१ दल दर्ता, कुन-कुन दलले दर्ता गराए ? – Deshko News
Home » देश » राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा २१ दल दर्ता, कुन-कुन दलले दर्ता गराए ?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा २१ दल दर्ता, कुन-कुन दलले दर्ता गराए ?
निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि २१ राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दललाई १५ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाका लागि यही पुस १४ देखि २८ गतेसम्म दिइएको दल दर्ता समयमा २१ वटा पार्टीले दर्ता गराएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका प्रवक्ता ढकालले शनिबार सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नेसमेत जानकारी गराउनुभयो ।